“Mpanelanelana Ara-kolotsaina Ny Bilaogera” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2012 13:25 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Български, English, Español, Français
[Lahatsoratra ao amin'ny Global Voices nivoaka voalohany tamin'ny teny Alemana teo ambany lohateny hoe “Blogger sind Kulturvermittler” momba ny “Amnesty Journal“, Jona 2012, dikanteny an'i Samy Boutayeb, izay isaoranay betsaka etoana]
“Manerana izao tontolo izao, ireo bilaogera sy olon-tsotra manao gazety dia mampiasa ny aterineto mba ho re ny feony. Mba hisorohana ny tsy fahafahan'ny hafatr'izy ireny hihoatra ny sakan'ny teny, ny tambajotra iraisam-pirenena “Global Voices” dia miasa mandika azy. Ivan Sigal, Tale mpanatanteraky ny Global Voices, dia nitafatafa tamin'ny Amnesty International Allemagne.
“Mba ho fanapariahana ny vaovao ho fantatry ny tontolo”. Ivan Sigal :@Ralf Rebmann/Amnesty
Ahoana no nahateraka ny hevitra hoe handika ireo bilaogy ety anaty aterineto ?
Tamin'ny 2005 no natsangana ny Global Voices, niainga taminà tetikasam-pikarohana iray an'ny Anjerimanontolo -Harvard, ao Etazonia. Manan-karem-pahalalana faran'izay tena sarobidy ireo bilaogera sy olon-tsotra manao gazety ao an-toerana. Mba ho azon'ny rehetra eto amin'ny tontolo horaisina ireny vaovao ireny, dia tsy misy safidy hafa afa-tsy ny fandikàna azy. Ny anjara andraikitry ny Global Voices dia mipetraka amin'ny fanomezana habaka iray ho an'ny fanehoan-kevitra sy vaovao izay mety tsy ho re mihitsy raha tsy nisy an'izay. Manana nofinofy hanome ny fahatakarana tsara indrindra momba ireo tranga rehetra miseho any rehetra any manerana ny tany ihany koa ilay tambajotra. Raha lazaina tsotra izany dia tahaka ny mpanelanelana ara-kolotsaina eo amin'ny firenen-tsamihafa ireo biloagera.
Ahoana tsara no tena fomba fiasan'ny Global Voices ?
Miasa manerana ny tany ny tambajotra ary manana bilaogera 500 mahery, mpandika teny sy mpanoratra. Jerenay ny lohahevitra manana ny akony eny anivon'ny tontolon'ny bilaogy. Rehefa misy lohahevitra iray – toy ny fiovàna teny anatin'ny tontolo Arabo ohatra – miteraka fahalinana be ho an'ireo mpamaky maneran-tany, angoninay ny fandraisana anjara avy amin'ireo bilaogy samihafa ary dia fakafakainay sy atambatray. Ireny lahatsoratra ireny indray avy eo no adika aminà fiteny efa ho roapolo mahery. Miasa maimaim-poana ireo mandray anjara amin'io tetikasa io.
Voamarina ve ny vaovao alohan'ny famoahana azy ?
Ny fototra ijoroan'ny Global Voices dia mipetraka amin'ny fanamarinana ny vaovao, amin'ny fitondràna fanazavana marolafy mikasika ny lohahevitra samihafa. Tarikanà mpamoaka lahatsoratra manana toeran'ny matihanina ho vadin'asany no miara-miasa amin'ireo mpanoratra sy bilaogera mba hiantohana ny fahamarinan'ireo vaovao. Io rafitra vita sedra io no ahafahanay miantoka hoe loharano tahaka ny inona no azo antoka.
Misy sehatra bilaogera mavitrika kokoa noho ny sasany ve ?
Sarotra ny hamaritra izay firenena ho tena mibahan-terana eo anivon'ny Global Voices, na dia hita aza fa ny sehatra bilaogera izatsy na izaroa dia tsy isalasalana fa mavitrika kokoa noho ny hafa. Amin'izao fotoana dia tsy manana mpiara-miasa loatra izahay avy ao Shina sy ireo firenena Afrikana miteny Frantsay. Etsy andaniny, ny sehatra tena mavitrika dia ny any Ejipta, Brezila ary Pakistana. Ny tontolon'ny bilaogy rosiana ihany koa dia navitrika tato anatin'ny telo taona farany teo. Tsapan'ny olona ny toerana mety ho tànan'ireny tambajotra ireny mba ho fifanakalozana vaovao. Izay tena nitombo be tokoa tany Rosia tato anatin'ny volana vitsy, dia ny fahatsiarovantena amin'ny dindon'ny tambajotra sosialy sy ny bilaogy eo amin'ny habaka politika. Isan'ny zavatra iray efa azo ihany koa izany tamin'ireo fiovàna namakivaky ny tontolo arabo.
Inona no ilain'ny hetsika iray nipoitra teo anivon'ny aterineto mba hahatonga azy ho hetsika an-dalambe sy fihetsiketsehana ?
Ireo revolisiona, ireo fandraisan'andraikitra sy ireo dingam-panavaozana no manome dingana mifangaroharo mitondra mankamin'ny vokatra isan-karazany. Mba hahatakarana misimisy kokoa an'ireny fivoaran-javatra ireny dia ilaina ny manaraka ireo fikarohana natao teo amin'io sehatra io. Azo nosainina ny hoe hanao fihetsiketsehana ny olona any Rosia. Ny kolotsain'ny fifanakalozan-kevitra sy ny adihevitra no tena manjaka ao. Mbola marina koa izany ho an'ireo firenena toa an'i Iran, Shina na Vietnam. Ny singa tena vatofototra dia ny fotoana niarahan'ny vondron'olona iray manana ny lanjany nanapa-kevitra mba hampanjary ho hita maso ilay eritreritra. Tany Myanmar, tany amin'ny 2007 dia izany no nitranga nandritra ny revolisionan'ny safran – na dia hoe ampahany vitsy tamin'ny mponina ihany aza no afaka niditra aterineto.
Tafatafa narindran'i Ralf Rebmann
Tale mpanatanteraky ny tambajotranà bilaogera “Global Voices” i Ivan Sigal hatramin'ny taona 2008. Talohan'io izy dia niasa ho an'ny Institute of Peace ao Etazonia sy ny ONG Internews Network. Nandritra ny folo taona mahery i Sigal dia nandalina ny fomba azon'ny fivoaran'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny vaovao hatao mba ho fandraisana anjara amin'ny famahàna tsy misy herisetra ny fifandirana any amin'ireo faritra misedra olana. Niara-dàlana taminà tetikasam-panofanana sy fanohanana ireo mpampahalala vaovao eny an-toerana ihany koa izy tany amin'ireo firenena ao anatin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, tany Afghanistan sy firenena Aziatika hafa.
Amerika Latina 3 andro izay
Eoropa Andrefana 4 herinandro izay